NBC News: Breaking News, US News & Live Video 6.0.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.0.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား NBC News: Breaking News, US News & Live Video
NBC News: Breaking News, US News & Live Video ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
NBC သတင်းအခုအချိန်မှာ, သင်ကြေကွဲသတင်းနှင့်သင်ဂရုစိုက်အရေးကြီးသောပုံပြင်များဆောင်တတ်၏, သတင်းသတိပေးချက်များကိုရယူပါနှင့်သီးသန့်, In-depth ကိုအစီရင်ခံ, analysis နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုရဂျာနယ်လစ်ထံမှအမြင်များ။ အလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသောအရပ်ထဲမှာသင်အကြိုက်ဆုံးအား NBC သတင်းနှင့် MSNBC အစီအစဉ်များ Watch နှင့် MSNBC ကနေတိုက်ရိုက်အသံနှင့်အတူတစ်နေ့တစ်လျှောက်လုံးချိတ်ဆက်နေဖို့။
• Breaking သတင်းသတိပေးချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်လွှင့်သောဗီဒီယို
NBC သတင်းနှင့် MSNBC ထံမှ•သီးသန့်သတင်းပို့နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
•တစ်နေရာတည်းတွင်သင်အကြိုက်ဆုံးအား NBC သတင်းနှင့် MSNBC ရှိုးပေါ်တက်ဖမ်း။ ညစဉ်ညတိုင်းသတင်း, TODAY, တွေ့ဆုံအဆိုပါစာနယ်ဇင်း, နံနက်ဂျိုးရာခေလ Maddow နှင့်ပိုပြီး!
•အ go အပေါ် MSNBC မှတိုက်ရိုက်နားထောင်ကြလော့
•သင့် Chromecast ကိုသို့မဟုတ်အခြား Cast ကို-enabled စက်ပေါ်ရှိဗီဒီယိုနှင့်စမ်းချောင်းအသံ Play ။
•ရရှိနိုင်သောအန်းဒရွိုက် TV ပေါ်မှာ
ဒီ app ကိုသင် Nielsen ရဲ့တီဗီ Ratings အဖွဲ့ကဲ့သို့စျေးကွက်သုတေသနအထောက်အကူပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့် Nielsen စီးပွားဖြစ်တိုင်းတာခြင်း software ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ သူတို့ကိုကိစ်စတှငျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုင်းတာခြင်းထုတ်ကုန်များနှင့်သင်၏ရွေးချယ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်များအတွက် http://www.nielsen.com/digitalprivacy သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
NBC News: Breaking News, US News & Live Video အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
NBC News: Breaking News, US News & Live Video အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
NBC News: Breaking News, US News & Live Video အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
NBC News: Breaking News, US News & Live Video အား အခ်က္ျပပါ
NBC News: Breaking News, US News & Live Video ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း NBC News: Breaking News, US News & Live Video အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.0.6
ထုတ်လုပ်သူ NBC News Digital LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.nbcuni.com/privacy/mobile-apps/
App Name: NBC News: Breaking News, US News & Live Video
Release date: 2019-09-05 21:09:24
လက်မှတ် SHA1: B0:6B:30:E4:27:19:92:F7:69:64:15:23:E2:3D:6F:AF:19:67:38:52
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Zumobi Developer
အဖွဲ့အစည်း (O): Zumobi
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): WA
NBC News: Breaking News, US News & Live Video APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ